कोरोना लडाईमा चुनौती बन्दै भारतीय भेरियन्ट, खोपको प्रभावकारितामा कमी | ईमाउण्टेन समाचार
कोरोना लडाईमा चुनौती बन्दै भारतीय भेरियन्ट, खोपको प्रभावकारितामा कमी
वैशाख ७, २०७८ पढ्न ६ मिनेट
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ–नयाँ भेरियन्ट अर्थात नयाँ–नयाँ रुपहरु देखिएपछि विश्वसँगै नेपाल पनि त्रसित छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टहरु देखा परेपछि विश्व समुदाय नै चिन्तित भएको छ । जुन भेरियन्टहरुले मानव आक्रामक रुपमा असर पु-याई रहेका छन् ।
विश्वकै लागि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको कोरोना भाइरसले फेरिरहने रुपलाई वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जसलाई चित्कित्सकीय भाषामा ‘होल जीन स्वीक्वेन्सिङ’ भनिन्छ । दक्षिण अफ्रिकी भेरियन्ट, युके भेरियन्ट, ब्राजिलियन भेरियन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट पनि यही प्रविधिबाट पत्ता लागेका हुन् ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै युके भेरियन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट पनि देखा परेको छ । यी दुईमध्ये भारतीय भेरियन्ट अलि कडा खालको पाइएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । उनका अनुसार भारतीय भेरियन्टमा कोरोनाविरुद्धको खोप प्रभावकारी देखिएको छैन । तर, युके भेरियन्टमा खोप केही प्रभावकारी देखिएको छ ।
के हो भारतीय डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट ?
भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सो भेरियन्टको भाइरस पत्ता लागेको हो । यो भेरियन्टलाई वैज्ञानिक भाषामा बी.१.६१७ भनिन्छ । यो भेरियन्ट भारतमा देखिएपनि बेलायतसम्म पुगेको छ । भारतीय भेरियन्टको भाइरसबाट बेलायतमा १ सय बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
अध्ययनका क्रममा अनुसन्धानकर्ताले दुई वटा म्युटेशन भएको भाइरस भेटे जसको नाम डबल म्युटेन्ट राखियो । म्युटेशन भेरियन्ट भाइरस भनेको दुई वटा ठाउँमा स्वरुप परिवर्तन हुने प्रकृतिको भाइरस हो । भाइरसहरुको स्वीक्वेन्स अर्थात् नम्बर हुन्छ । अहिले भेटिएका भाइरसमा ई४८४क्यू र एल४५२ आर छ । अर्थात् दुई ठाउँमा नम्बर परिवर्तन भयो । यसलाई सामान्यतया भाइरसको परिवर्तित स्वरुप भनिन्छ । जुन दुई ठाउँमा देखियो भन्न मिल्छ ।
भारतीय डबल म्युटेन्ट भेरियन्टले कस्तो असर गर्छ ?
डा. पुनका अनुसार भारतीय भेरियन्टको भाइरसले संक्रमितमा कडा असर गर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै मात्रामा घटाउँछ । ‘यो भेरियन्टमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई छल्न सक्ने गुण छ, बढी संक्रामक र रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई छल्न सक्ने विशेषता यो भाइरसमा देखिएको छ’ – डा.पुनले भने । ‘नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपनि भारतीय भेरियन्टको भाइरस देखिएका व्यक्तिमा कोरोना खोपले जति मात्रामा असर गर्नुपर्ने थियो गरेन’– पुनको भनाइ छ । भारतीय भेरियन्टमा खोप प्रभावकारी नदेखिएकाले नेपालका लागि भारतीय भेरियन्ट चुनौतीपूर्ण बनेको डा. पुन बताउँछन् ।
तर युके भेरियन्टको भाइरस देखिएका व्यक्तिमा भने कोरोनाविरुद्धको खोपले राम्रै प्रभाव पारेको उनको भनाई छ ।
हेल्प डेस्क छ, स्वास्थ्य कर्मचारी छैनन्
बाग्लुङमा एउटै विद्यालयका ३९ विद्यार्थीमा देखियो कोरोना
नेपालमा पनि जडान भयो कोरोनाका नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउने मेसिन
भारतको १८ राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फेला
दिल्लीका ५० प्रतिशत संक्रमितमा डबल म्युटेन्ट र युके भेरियन्ट
युरोपका विभिन्न मुलुक नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमणको चपेटामा
नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरसको संक्रमण स्पेन, स्विडेन र स्विटजरल्याण्डमा समेत भटियो
बेलायतबाट सुरुभएको कोरोना भाइसरको नयाँ प्रकार फ्रान्समा पनि देखा पर्‍यो